China Smart socket vagadziri uye vatengesi | KUPonesa
Iyo yekuchaja kutonga socket ndeye smart socket ine programmable nguva, kuratidza uye switch switch. Inogona kupedzisa magetsi paramende kuyerwa senge voltage, ikozvino, inoshanda simba chinhu, kuwanda, etc., simba kuyerwa, kuratidza data, kuburitsa control, nezvimwe zvinoshandiswa modhi inogona kushandiswa zvakanyanya kuchaja kutonga kwemagarage emhuri uye kushandiswa kwesimba kwakasimba kwe mabhizinesi nemasangano.
1. Kudzivirira kuwedzeredza: paunobhadharisa mota dzemabhatiri, nharembozha, nezvimwe .. Inogona kudzivirira kudzokorora kwakawandisa kubhatiri, wedzera hupenyu hwebhatiri zvakanyanya uye kuderedza kubhadharisa kushandiswa kwesimba.
2. Atomatiki magetsi kubva mushure mekubhadhara zvakakwana: gura iyo magetsi pakarepo bhatiri rizere, ramba kuwedzera uye kupisa kudzivirira moto
3. Kurwisa-kurodha-kuregedza: chaiko uye nekukurumidza kudzoreredza basa kudzikisira kunogona kudzivirira magetsi emagetsi kubva mukukonzera moto nekuda kwekukurumidza kuwedzera kwezvazvino kana zvakaipa kana pfupi dunhu rakaitika.
4. Nhamba dzemagetsi: iyo chaiyo magetsi magetsi kuyerwa kwazvino, voltage, uye simba chiyero, zvichiita kuti vashandisi vazive chaiyo yekushandisa magetsi uye inowedzera magetsi kushandisa ezvemagetsi magetsi munguva yakakodzera.
1. Basa rekuchaja: Iyo yakangwara yekuchaja sokisi inogona kuona kupera kwebasa rekuchaja maererano nekushanduka kwesimba rekuchaja, uye wozvidzikisira wozvidzora kuti udzivise.
2. Basa rekuita nguva: akangwara anotora nguva masokisi, anosvika pamapoka masere enguva anogona kuiswa. Inogona kushandurwa nekubviswa zvinoenderana nenguva yakatarwa.
3. Paramende ruzivo: Mune iyo isiri-yekuisa mamiriro, tinya "kumusoro" uye "pasi" makiyi kuti uone magetsi azvino, ikozvino, simba, simba rakaunganidzwa, nezvimwe.
4. Manual switch: mune simba-pane nyika, tinya "Pinda" kiyi kwemasekondi matatu kuti uchinje switch.
6. Power reset: Kana iyo LCD ichiratidza iyo yekuwedzera simba, chengetedza "Seta" kiyi kwemasekondi matatu kuti uise simba rekuwedzera
7. Kuwedzeredza kudzivirirwa: kana simba racho richidarika 1100W, simba racho rinenge ratodzimburwa mukati memasekondi maviri, chiratidzo chechiedza chinopenya, uye simba racho richadzoserwa otomatiki mushure memasekonzi 30 ekucheka simba Mushure mematatu akateedzana kuwanda, simba iri kugurwa zvachose, uye iwe unogona kutangisa basa nekutsidzira "Enter" kiyi.
Yepfuura: Matatu-chikamu akawanda-anoshanda emagetsi simba mita
Inotevera: Strip strip
Viga Smart Socket
Mini Smart Socket Mirayiridzo
Smart Chiedza Bulb Socket
Smart Chiedza Socket
Smart Simba Socket